Kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo labaduba xiiso u qaba James Rodriguez – Xidigaha
Arsenal iyo Manchester United ayaa labadoodaba lagu soo waramayaa in xiiseynayaan saxiixa Real Madrid weerarka James Rodriguez inta lagu guda jiro xagaagan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
29-sano jirka ayaa si weyn loo filayaa inuu ka tago Bernabeu isbuucyada soo socda, isagoo ku dhibtooday inuu si joogto ah u ciyaaro xilli ciyaareedkii hore, isagoo saftay kaliya 14 kulan tartamada oo dhan.
Sida laga soo xigtay Marca , Arsenal iyo United ayaa labaduba isha ku haya inay xiddiga heerka caalami ee dalka Colombia keenaan Premier League ka hor ololaha 2020-21.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in kubadsameeyaha uu ku qiimeeyo 25 milyan euro (£ 22.5m) uu xiliga walbo u dhaqaaqi karo kooxaha doonaya.
Rodriguez ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuu aqbalo dhimis yar oo ah 8 milyan oo euro (£ 7.2m) inuu qaato sanadkii laakiin ma doonayo inuu dhimo xirmadiisa mushaarka 50%, taasoo ay soo jeediyeen kooxaha qaar.
Gooldhaliyaha ayaa dhaliyay kaliya hal gool labo kalena caawiye ka ahaa Los Blancos xilli ciyaareedkii hore.
Be the first to comment on "Kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo labaduba xiiso u qaba James Rodriguez"